(दिल्ली बाट पठाईएको)
नयाँ दिल्ली (/ˌnjuː ˈdɛli/ ( सुन्नुहोस्)) (पञ्जाबी: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, उर्दू: نئی دلی) दिल्लीको एक जिल्ला र भारतको राजधानी क्षेत्र हो । नयाँ दिल्ली भारत सरकारको कार्यकारी, संसदीय र न्यायपालिका शाखाको सदनको रूपमा कार्य गर्दछ । यो दिल्लीको ११ जिल्लाहरू मध्ये एक हो । १४८३ वर्ग किलोमीटरमा फैलिएको दिल्ली भारतको तेस्रो सबैभन्दा ठूलो महानगर हो । यहाँको जनसङ्ख्या लगभग २ करोड ५० लाख रहेको छ । यहाँ बोलिने मुख्य भाषाहरू : हिन्दी, पञ्जाबी, उर्दू र अङ्ग्रेजी हुन । यसको दक्षिण पश्चिममा अरावली पर्वत श्रृखला र पूर्वमा यमुना नदी रहेको छ, जसको किनारमा यो शहर अवस्थित छ । यो प्राचीन समयमा गंगा नदिको मैदान भएर जाने वाणिज्य मार्गको बाटोमा पर्न मुख्य स्थल थियो । यमुना नदीको किनारामा स्थित यस नगरको गौरवशाली पौराणिक इतिहास छ । यो भारतको अतिप्राचीन नगर हो । यसको इतिहासको प्रारम्भ सिन्धु घाटी सभ्यतासँग जोडिएको छ । हरियाणाको आसपासका क्षेत्रहरूमा भएको खोजबाट यस कुराको प्रमाण भेटिएका छन् । महाभारत कालमा यस शहरको नाम इन्द्रप्रस्थ थियो । दिल्ली सल्तनतको उत्थानसँग नै दिल्ली एक प्रमुख राजनीतिक, सास्कृतिक र वाणिज्यिक शहरको रूपमा देखापर्‍यो । यहाँ धेरै प्राचीन र मध्यकालीन भवनहरू तथा तिनका अवशेषहरूलाई देख्न सकिन्छ । सन १६३९ मा मुगल बादशाह शाहजहाँले दिल्लीमा नै एउटा चारै तर्फबाट पर्खालले घेरिएको सहरको निर्माण गराए, जुन सन् १६७९ देखि सन् १८५७ सम्म मुगल साम्राज्यको राजधानी रह्यो । १८औं र १९औं शताब्दीमा इस्ट इन्डिया कम्पनीले लगभग पुरा भारतलाई आफ्नो कब्जामा लियो । त्यसपछि उनीहरूले कोलकातालाई आफ्नो राजधानी बनाए । सन् १९११ मा अंग्रेज सरकारले पुन: राजधानी दिल्ली फिर्ता लैजाने निर्णय गर्‍यो । यसको लागि पुरानो दिल्लीको दक्षिणमा एक नयाँ नगर नयाँ दिल्लीको निर्माण प्रारम्भ भयो । अंग्रेजबाट सन् १९४७ मा स्वतन्त्रता प्राप्त गरेपछि नयाँ दिल्ली भारतको राजधानी घोषित गरियो । स्वतन्त्रता प्राप्ति पश्चात् दिल्लीमा विभिन्न क्षेत्रहरूबाट मान्छेहरूको आवागमन भयो, यसले दिल्लीको स्वरूपमा आमूल परिवर्तन ल्यायो । विभिन्न प्रदेसहरू, धर्महरू र जातजातिहरूका मान्छेहरूको दिल्लीमा बसाईका कारण दिल्लीको सहरीकरण त भयो नै साथै यहाँ एक मिश्रित संस्कृतिले पनि जन्म लियो । आज दिल्ली भारतको एक प्रमुख राजनीतिक, सास्कृतिक र वाणिज्यिक केन्द्रको रूपमा रहेको छ ।
दिल्लीको प्राचीनतम उल्लेख महाभारतमा भेटिन्छ जहाँ यसको उल्लेख प्राचीन इन्द्रप्रस्थको रूपमा गरिएछ । इन्द्रप्रस्थ पाण्डवहरूको राजधानी थियो । पुरातात्विक रूपले जुन पहिले प्रमाण पाईएको छ त्यसबाट थाहा हुन्छ कि ईसा पूर्व दुई हजार वर्ष पहिले पनि दिल्ली तथा यसको आस-पास क्षेत्रमा मानव बसोबास गर्ने गर्थे । मौर्य काल (ईसा पूर्व ३००)देखि यहाँ एउटा नगरको विकास शुरु भयो । चन्दरबरदाईको रचना पृथ्वीराज रासोमा तोमर राजा अनंगपाललाई दिल्लीको संस्थापक बताईएको छ । यस्तो मानिन्छ कि उनले नै 'लाल-कोट'को निर्माण गराएका थिए र लौह-स्तंभको दिल्ली लिएर आए । दिल्लमा तोमरहरूको शासनकाल इ.सं. ९०० देखि इ.सं.१२०० सम्म रहेको मानिन्छ । 'दिल्ली' या 'दिल्लिका' शब्दको प्रयोग सर्वप्रथम उदयपुरमा प्राप्त भएका शिलालेखहरूमा पाईयो । यस शिलालेखको समय इ.सं. ११७० निर्धारित गरियो । इ.सं. १२०६ पछि दिल्ली दिल्ली सल्तनतको राजधानी बन्यो । यस राज्यमा खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश र लोधी वंश समते केही अन्य वंशहरूले शासन गर्‍यो । यस्तो मानिन्छ कि आजको आधुनिक दिल्ली बन्नु भन्दा पहिले दिल्ली सात पल्ट उजाड भएर विभिन्न स्थानहरूमा बस्यो, जसको केही अवशेष अहिले पनि देख्न सकिन्छ । दिल्लीको तत्कालीन शासकहरूले यसको स्वरूपमा धेरै पल्ट परिवर्तन गरे । मुगल बादशाह हुमायूँले सरहिंदको नजीकको युद्धमा अफगानहरूलाई पराजित गरे तथा बिना कुनै विरोधको दिल्लीमा अधिकार जमाए । हुमायूँको मृत्यु पछि हेमू विक्रमादित्यको नेतृत्वमा अफगानीहरूले मुगल सेनालाई पराजित गरेर आगरा तथा दिल्लीमा पुनः अधिकार प्राप्त गरे। मुगल बादशाह अकबरले आफ्नो राजधानीको दिल्लीबाट आगरा स्थान्तरित गरे । अकबरको नाति शाहजहाँ सन् (१६२८-१६५८)ले सत्रौँ सताब्दीको मध्यमा यसलाई सातौँ पल्ट बनाए जसलाई शाहजहानाबादको नामले चिनिन थालियो । शाहजहानाबादलाई साधारण बोली-चालीको भाषामा पुरानो शहर या पुरानो दिल्ली भनिन्छ। प्राचीनकालदेखि पुरानो दिल्लीमा अनेक राजाहरू एवं सम्राटहरूले राज्य गरेका छन तथा समय-समयमा यसको नाममा पनि परिवर्तन भईरहेको थियो। पुरानी दिल्ली सन् १६३८ पछि मुगल सम्राटहरूको राजधानी रह्यो। जहाँ आखिरी मुगल शाह बहादुर शाह जफर थिए। सन १८५७ को सैन्य विद्रोह पछि दिल्लीमा ब्रिटिश शासनको आदेशमा शासन चल्न लाग्यो । सन १८५७ को यस प्रथम भारतीय स्वतन्त्रता संग्रामको आन्दोलनलाई पूर्ण रूपमा दबाए पछि अंग्रेजहरूले बहादुरशाह जफरलाई रङ्गुन पठाई दिए तथा भारत पूर्ण रूपमा अंग्रेजहरूको अधीन भयो। प्रारम्भमा उनिहरूले कलकत्ता (आजकल कोलकाता)बाट शासन गर्न थाले तर सन् १९११ मा उपनिवेश राजधानीलाई दिल्ली स्थानान्तरित गरियो । सन १९४७ मा भारत स्वतन्त्रता भए पछि यसलाई अधिकारिक रूपले भारतको राजधानी घोषित गरियो । दिल्लीमा धेरै राजाहरूको साम्राज्यको उदय तथा पतनको साक्षी आज पनि विद्धमान छन् । तोमर शासकहरूमा दिल्लीको स्थापनाको श्रेय अनंगपाललाई जान्छ ।
विकिमिडिया कमन्समा दिल्ली सम्बन्धी अन्य सामग्रीहरू रहेका छन्।
"https://ne.wikipedia.org/w/index.php?title=नयाँ_दिल्ली&oldid=1028769" बाट अनुप्रेषित
अन्तिम सम्पादन २२ जुलाई २०२१, २०:२५
यो पृष्ठलाई अन्तिमपटक २०:२५, २२ जुलाई २०२१ मा परिवर्तन गरिएको थियो।